राज्यले गरेको छ भनेर ढुक्क हुने बाटोमा उज्यालो देखिएको छ।"डा. शेरबहादुर पुन" - लण्डन काठमाडौँ
राज्यले गरेको छ भनेर ढुक्क हुने बाटोमा उज्यालो देखिएको छ।”डा. शेरबहादुर पुन”
पछिल्ला दिनमा परीक्षणको दायरा बढ्नु र नयाँ संक्रमित नदेखिनुले एक प्रकारको आशा जगाएको देखिन्छ। टेकु अस्पतालका संक्रमण रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन अहिले आशाको किरण देख्एिको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘राज्यले गरेको थियो भनेर ढुक्क हुने बाटोमा उज्यालो देखिएको छ। अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा नयाँ संक्रमित पनि देखिएका छैनन् र परीक्षण पनि केही दिन यता बढिरहेको छ। यसले केही मात्रामा हामीमा आशा जगाएको छ।’ यही क्रममा राज्यले परीक्षणलाई बढाउँदै लगेमा भोलि के कस्तो अवस्था आउँछ भन्ने बारेमा पनि थाहा पाउन सकिन्छ। सँगै सोही अनुसारको रणनीति तयार गर्न सकिने डा. पुन बताउँछन्।
‘हिजो मान्छेमा शंकैशंका थियो, त्यसमा केही हदसम्म अलिकति मल्हम लगाएको छ,’ डा. पुन थप्छन्, ‘कतिपय विज्ञहरुले पनि परीक्षणलाई बढाउनुपर्छ भन्नुभएको थियो। केही दिनयता अहिले जुन किसिमले परीक्षण भइरहेको छ, त्यो स्वागतयोग्य छ। र नयाँ संक्रमित नदेखिनुले अर्को आशाको किरण पनि देखाएको छ।’
परीक्षणलाई जति बढाउँदै गयो, संक्रमण छ वा छैन भन्ने विषयमा सम्भावना पनि बढ्दै जान्छ। परीक्षण गर्दा कतै संक्रमित भएमा उनीहरुको पनि पहिचान भएर आवश्यक कदम चाल्न सक्ने स्थिति बन्छ। ‘हामी जुन रुपमा आत्तिएका थियौं, त्यसलाई अहिलेको स्थितिले सम्बोधन गरेको छ।’ डा. पुन भन्छन, ‘हिजो आममानिसले परीक्षण भएन भनेर जुन रुपमा सरकारको आलोचना गर्नेदेखि सशंकित हुने अवस्था थियो, त्यसलाई अहिले केही दिन यता बढेको परीक्षणको दायराले सम्बोधन गरेको छ।’
प्रधानमन्त्रीले केही दिनअघि गरेको सम्बोधनमा अझै केही साता नेपालको लागि जोखिमयुक्त रहेको बताएका थिए। अगामी केही सातामा संक्रमण देखिने वा नदेखिने, नदेखिएमा संक्रमणको जोखिम पनि कम हुँदै जाने सम्भावना रहन्छ। डा. पुन भन्छन्, ‘अहिले नयाँ विरामी थपिएका छैनन्। मानिसमा रहेको भित्री आशंकालाई पनि यसले सम्बोधन गरेको छ। नयाँ विरामी पनि नदेखिनु र परीक्षणको दायरा पनि फराकिलो हुँदै जानुले आउने बिहानीमा केही आशाका किरण प्रष्फुटित भएको देखिएको छ।’